XFCE 4.16 dingana fampandrosoana manomboka | Avy amin'ny Linux
Omaly Naseho ireo mpamorona birao XFCE tamin'ny alàlan'ny fanambarana ny fahavitan'ny mihamangatsiaka ny dingana fandrindrana sy ny fiankinan-doha ary ny famindrana ny tetikasa amin'ny sehatra fampandrosoana izay ho ilay kinova XFCE 4.16 vaovao.
Ny fampandrosoana dia kasaina ho vita amin'ny tapaky ny taona ho avy, aorian'izay dia hijanona hamorona famoahana savaranonando telo mialoha ny famoahana farany. Amin'ireo fanovana manaraka, voamarika io ny faran'ny fanohanana tsy voatery ho an'ny GTK2 sy ny fanavaozana ny interface an'ny mpampiasa.
toy ny Nandritra ny fizotry ny fampandrosoana ny kinova 4.14, nanandrana niantsambo ireo mpamorona ny tontolo iainana GTK2 mankany GTK3 tsy manova ny interfaceraha ho an'ny XFCE 4.16 maneho izany izy ireo mikasa ny hampitsahatra ny fanohanan'ny GTK2 ary hampiasa tsara ny GTK3, ankoatr'izay dia hanomboka hanatsara ny fisehon'ny takelaka ny asa.
Araka ny nampanantenaina, amin'ity indray mitoraka ity dia hiezaka hitazona fandaharam-potoana hentitra kokoa isika, ka tsy mila adim-potoana intsony: nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny dingana fampandrosoana mankany amin'ny Xfce 4.16!
Nandritra ny asan'ity asa ity, hisy ny fanohanana amin'ny fanaingoana ny varavarankely amin'ny lafiny client (CSD,) izay ny lohateny sy ny baravarankely dia tsy tarihin'ny mpitantana ny varavarankely, fa ilay fampiharana mihitsy. Kasaina hampiasa CSD izy hampidirina lohateny multifunctional sy sary miafina ao anaty boaty fifampiresahana mifandraika amin'ny fanovana toe-javatra.
Sary kisary sasany, ny fomba fanidiana ny varavarankely, hosoloina safidy an'ohatra toa marina kokoa izany rehefa mifidy lohahevitra maizina. Ny fanampiana amin'ny fampisehoana ny fizarana "Desktop Actions" dia ho ampidirina ao amin'ny menio misy ny plugin miaraka amina fampiharana ny hitsin-dàlana handefasana rindranasa, ahafahana mandefa mpamily manokana an'ny fampiharana, toy ny fanokafana varavarankely Firefox fanampiny.
Isika koa dia hilalao amin'ny haingon-tsoratry ny mpanjifa izay heverinay fa misy dikany (ohatra, fanoloana ilay antsoina hoe XfceTitledDialog, izay ampiasaina amin'ny fifanakalozan-kevitra rehetra miaraka amina kinova HeaderBar).
Ny tranomboky libgtop dia hampiana amin'ny isan'ny fiankinan-doha, izay hampiasaina hanehoana ny mombamomba ny rafitra amin'ny dinika "About".
Tsy andrasana ny fanovana goavana ho an'ny mpitantana ny rakitra Thunar ao amin'ny interface, fa fanatsarana kely maro no kasaina hanatsorana ny fiasa amin'ny rakitra. Ny kinova Thunar vaovao tokony hanana fakana vaovao amin'ny plugin API ianao, mamela anao hanisy hetsika vaovao sy hametrahana fikirakirana fizahana lahatahiry. Ohatra, azo atao ny mitahiry ny fanovana maodely mifandraika amin'ireo lahatahiry tsirairay.
Kasaina hampiana amin'ny configurator koa ny fahaizana manitatra ny mombamomba ny vokatra fitaratra amin'ny mpanara-maso maro, izay tsy mitovy ny vahaolana.
Mba hifehezana ny famokarana loko, mikasa ny hanomana ny fizotranao manokana mifanerasera amin'ny colord, tsy mila mihazakazaka xiccd. Ao amin'ny mpitantana fitantanana herinaratra, Heverina hiseho ny maody jiro amin'ny alina ho toy ny fiasa ara-potoana napetraka ho toy ny sivana amin'ny efijery hampihenana ny fihenan'ny maso.
Etsy ankilany, ny mpandrindra dia nikasa ny hanampy XFCE 4.16 hanampy sasany fanatsarana plugin tontonana izay manasongadina ny doka manampy maody maizinaary koa ny fampidirana histogramme bateria amin'ny fifanakalozan-kevitra hahitana ny fihenan'ny bateria sy ny fampiharana ny interface visual hanarahana ny famoahana bateria.
Araka ny efa voalaza etsy ambony, ity tsingerina ity dia natao ho maivana kokoa hahafahantsika "mandeha mikasa" ary mahazo kinova ho an'ny tobin'ny mpampiasa alohanay amin'ireo kinova roa teo aloha.
Farany eny Liana hahafantatra bebe kokoa momba izany izy ireona momba ny fanambarana sy ny fanambarana manaraka momba ity tontolon'ny birao ity dia azonao atao ny manamarina ny antsipiriany Ao amin'ity rohy manaraka ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » XFCE 4.16 dingana fampandrosoana manomboka
Vaovao tsara, tsara!
Ubuntu Mate 19.10 tonga miaraka amin'i Kernel 5.3, Mate 1.22.2, tetikasa vaovao tompon'andraikitra ary maro hafa